Kubvunzana naMercedes Santos, uyo anopa nyowani nyowani: Kusungwa | Zvazvino Zvinyorwa
Kubvunzana naMercedes Santos, uyo anopa nyowani nyowani: Kukombwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Hurukuro, Vanyori
Mercedes Santos Mats inopa yake nyowani nyowani, Kukombwa, iyo yatove kutengeswa. Tichava pamusoro Aranjuez, mangwana acho 24. La mutori wenhau uye munyori rwizi, wandinofarira kusangana naye ndoverenga, dzoka nemumwe nhoroondo yezvakaitika kare, maitiro ayo, uko pasina kushaikwa kwe adventures, kunyengera uye rudo. Ini ndinotenda chaizvo iyi bvunzurudzo kwaanotaura nezve rake basa, mabhuku aanofarira uye vanyori, zvinokuvaraidza zvemunyori uye nezvimwe zvakawanda.
Kubvunzana naMercedes Santos
Literature Nhau: Unoyeuka here bhuku rekutanga rawakaverenga? Uye nyaya yekutanga iwe yawanyora?
Mercedes Santos: Kwete ndinofungidzira tales, asi hongu nekuverenga kwandakafarira kuverenga. Nemakomiki e Mortadelo uye Filemon. Uye ivo vachiri kuramba vachindiita kuseka, chimwe chinhu mashoma mamwe mabhuku anoita. Kuseka ndiko kwakanyanya kuoma. Kuita kuti vanhu vacheme zviri nyore, kuseka vanhu kwakanyanya kuoma.
Nezve nyaya dzandakanyora, ndinofanira kutaura kuti kusiyana nevamwe vanyori vanoti ivo vaigara vachinzwa kurudziro, Ini ndaida kunyora, asi semutori wenhau, semunyori Handina kufunga nezvazvo kusvika papfuura nguva, kusvikira makore gumi nemana kana gumi nemashanu apfuura. Ichokwadi kuti pandakanga ndiri mudiki ndakaenda kunorara ndichigadzirisa mafirimu andaiona, ndichichinja magumo kana kuwedzera zvirongwa zvandaizoda kuti vave nazvo. Zvimwe chete zvakaitika kwandiri nemabhuku andakaverenga. Asi anga ari mazuva mashoma, senzira yekubata hope, ndobva ndavasiya.
MS: Yekutanga yaive comics uye avo baba vangu vaive nawo pamashefu avo seaya Frank Jerby nebasa rake Apo guta rakanga rakarara kana the engano dzerudo dzaambuya vangu, mamwe acho ndichiri nawo segoridhe pamucheka. Iwo anosungirwa magwaro echikoro nguva dzose, nekumanikidzwa, aive anofinha.
Kunyangwe ndichirangarira mabhuku senge Chokwadi pamusoro penyaya yeSavolta, yaMendoza murondedzero, kana Imba iripo, naLuis Rosales, izvo zvakadzika mukati mangu. Ichokwadi zvakare kuti kana iwe ukaverenga iwo mabhuku nhasi, iwe haungatombonzwa manzwiro akafanana. Zvakamboitika kwandiri zvisati zvaitika. Asi vakabva vabatana neni. Kufanana Bomarzo, nhoroondo yenhoroondo yakaiswa muRenaissance Italy, naMúgica Laínez, kana imwe naJane Austen, Kuzvikudza uye Kusarura.
AL: Ndiani munyori waunofarira? Iwe unogona kusarudza inopfuura imwe uye kubva kune ese eras
MS: Ndine vazhinji. Handizive ... Mune enhoroondo enhoroondo, inova mhando yangu, ndingatarise chiSpanish Javier Negrete. Ruzivo rwake salamis, nezve Themistocles uye rwisana rwekutanga pakati peEast neWest, nemaGreek nemaPersia vari muhondo, ndakazviona zvakanaka. Ndakaverengera zvakawanda kuna Ken follet, zvekare, Lope de Vega Ndinochida, zvakawanda kudzidzira, zvimwe zve nhetembo....
MS: Izvo zvaBernard Cornwell. Iyo ine kugona kukuzivisa iwe kune zvinoita kunge zvakajairika zviitiko kana mavara ayo anongoerekana akarova iwe kune imwe nzvimbo. Merlin yako mashiripiti.
KU: Chero mania kana zvasvika pakunyora kana kuverenga?
MS: Vakawanda. Chete, nenguva kana nemabhuku akasiyana, ivo vanochinja. Asi zvakazara Ndakaverenga zvandinonzwa senge. Ndine mabhuku mazhinji akatanga kuti ndinopedza - kana kwete - pandinenge ndichida. Ini ndinogona kusanganisa rondedzero yezvematongerwo enyika nebhuku renhetembo pasina dambudziko. Kunyora, ini ndinoda kuve nekudya kwemangwanani ndega kakati wandei vhiki yekujekesa pfungwa dzangu idzo dzimwe nguva dzinofambira mberi nekukurumidza zvekuti dzinonditiza.
MS: Ndakaverenga nekunyora chero kupi. Dzimwe nguva nevana vangu vakatenderedza, mumba yekutandarira, TV iine uye imbwa yangu yakatakura bhora kutamba. Asi kunyora Ini ndinofarira kuzviita palaptop, padhuze newindo rekugara. Ini ndaimbozviitira mumba mangu, asi sezvandinotaura, kuravira kunoramba kuchichinja. Kufunga nezvezvirongwa zvandinoda kuzviita kunze kwemusha, Kuva nekofi chero kupi, kazhinji mu McDonalds. Ini ndinoda mahwindo ayo mahombe uye ayo akasarudzika maonero. Na9 o'clock, pandinoenda, ndinenge ndave ndega, hapana anondinetsa.
MS: Zvakawanda. Sezvandambotaura kare, ndinoda sei Cornwell hunhu hunhu hwake, ndinofarira mashiripiti e Austen kana the Charlotte, rwiyo rwe Annie dillard, marongero e sweig...
AL: Mhando dzako dzaunofarira?
MS: Novela nhoroondo, kudzidzira --Sainzi, huzivi, magariro, nhoroondo-, nhoroondo, memoirs...
MS: Ndiri kuverenga Kusangana kwakaipa mumwenje wemwedzinaW Stanley Moss yeCliff. Ndakaifarira zvakanyanya 14 de Julio neFrance Eric Vouillard. Uye kunyora, ndakanyudzwa mu Hondo Yenyika II.
MS: Zvakaoma kutsikisa Saka manje muSpain mamwe mazita mashoma anoburitswa gore rega rega. Asi kusiyana nedzimwe nyika munharaunda medu, uko kwakawanda kunotsikiswa nevanyori vavo uye kushoma kweshanduro dzekunze dzinoshandurwa, apa zvinoitwa neimwe nzira yakatenderedza. Vazhinji vatorwa vanoburitswa ayo asiri anogara akanaka mabasa. Nyika yekutsikisa yakavharwa uye isingapindike. Asi kana iwe uchida kunyora, iwe unofanirwa Ramba uchiedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naMercedes Santos, uyo anopa nyowani nyowani: Kukombwa
Luis Rosales. Nyanduri weChizvarwa cha '36. Nhetembo Dzakasarudzwa